सलमान खानको कैटरीना कैफसँगको रोमान्सको भिडियो बाहिरिएपछि तनाव [ भिडियोसहित ] – Khabaarpati
November 30, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सलमान खानको कैटरीना कैफसँगको रोमान्सको भिडियो बाहिरिएपछि तनाव [ भिडियोसहित ]
काठामडौं । कैटरीना कैफ र सलमान खानको फिल्म ‘एक था टाइगर’ रिलीज भएको ८ बर्ष भयो । आज पनि, फ्यानहरूले यो फिल्म धेरै मन पराउँछन् । फिल्ममा दर्शकहरुले कैफ र खानको जोडीलाई मन पनि पराएका छन् ।
अब यस फिल्मको एक भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियो यशराज फिल्म्स द्वारा ट्विटरमा साझा गरिएको छ । यो भिडियो गीत माशल्लाहको शूटिङ्गको बेलाको हो । भिडियोमा कैफ र खान रमाईलो गरिरहेको देखिन्छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
उनले त्यहाँ निक्कै रोमान्स गरेको देखिन्छ । ८ बर्षपछि यो भिडियो बाहिरिएपछि उनीहरु तनावमा छन् । भिडियो सार्वजनिक गर्नेसँग सलमान खानको कैटरीना कैफ रिसाएको स्रोतको दावी छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि कैटरीना कैफ र सलमान खानले गीतको शुट गरे ।
त्यसबेला सलमान खान रमाइलो गर्न थाल्छन् । सलमानलाई यो गरिरहेको देखेर कैटरीना कैफ हास्यास्पद स्टाइलमा गलामा छिन् । यशराज फिल्म्सले यस भिडियो क्लिप साझा गरेर क्याप्शनमा लेखे, ‘एक जोडदार नाच, ज्यादै कठिन परिश्रम, टीम वर्क र यसको पछाडिको रमाइलो ।’ सलमान खान आज बिग बोसको १४ औं सत्रको होस्टिङ्गमा व्यस्त छन् ।
A stunning dance. A whole lot of hard work, teamwork and fun behind it. #EkThaTiger | #YRF50 pic.twitter.com/mtb4KVKseg
— Yash Raj Films (@yrf) November 26, 2020
उनको अर्को फिल्म राधे–योर मोस्ट वान्टेड भाई’ रिलीजको तयारीमा रहेको छ । राधेमा सलमान खान, ज्याकी श्रफ, रणदीप हूडा, दिशा पटानी र प्रभुदेवा लगायत कलाकारहरुले काम गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर कैफको कामको कुरा गर्ने हो भने उनी छिट्टै फिल्म ‘सौर्यवंशी’ मा देखा पर्नेछिन् । यस फिल्ममा उनी अक्षय कुमारको साथ मुख्य भूमिकामा देखा पर्नेछन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,